एउटी मुस्लिम किशोरीको विद्रोह | Ratopati
किशोरी भन्छिन्, ‘बहुत बुरा हो सक्ता था, में बालबाल बची’
personमदन ढुङ्गाना exploreकाठमाडौं access_timeकात्तिक ४, २०७६ chat_bubble_outline1
गत शुक्रबार चितवनस्थित आफन्त नेपालको आवास गृहमा हामी पुगेका थियौँ ।
करिब ५ फुट उचाइ, कुर्ता र सुरुवालमा सजिएकी किशोरी हामीलाई देख्नेबित्तिकै थोरै मुस्कुराइन् ।
ती किशोरी थिइन्, सलमा खातुन (परिवर्तित नाम) । भर्खरै १८ वर्ष टेकेकी सलमा ५ महिनाभन्दा बढी समय भारतको एक सुरक्षित आवास गृहमा बसेर नेपाल आइपुगेकी थिइन् ।
भारतको बालकल्याण समितिले राखिदिएको एक आश्रममा सलमा १ सय ६५ दिन बसेर असोजको १६ गते मात्रै नेपाल आइपुगेकी थिइन् ।
आफन्त नेपालको दिल्लीस्थित कार्यालयले सलमालाई भारतको आश्रमबाट नेपाल ल्याउन पहल गरेको थियो । यतिबेला उनी चितवनस्थित आफन्त नेपालको आश्रममा बसेर सीपमूलक तालिम लिइरहेकी छिन् ।
नेपाली भाषा बुझे पनि नेपालीमै जवाफ फर्काउन भने सलमालाई निकै गाह्रो पथ्र्यो । हामीले तराई मूलकै एकजना युवतीलाई दोभाषेको रुपमा सँगै राखेर सलमासँग कुराकानीको सुरुवात गर्यौँ ।
सलमाको दिल्ली यात्रा
१७ वर्षकी सलमा खातुन कपिलवस्तुस्थित आफ्नै घरमा बस्ने गर्थिन् । कपिलवस्तुकै स्थानीय मदरसामा उर्दु भाषामै ५ कक्षासम्म अध्ययन गरेकी सलमाले त्योभन्दा बढी पढ्न भने पाइनन् ।
‘किन पढ्न पाउनुभएन त ?’ हाम्रो प्रश्न टुङ्गिन नपाउँदै उनले जवाफ दिइन्, ‘बाबाले पढ्न दिनुभएन ।’
‘बाबाले किन पढ्न दिनुभएन त ?’ हाम्रो अर्को प्रश्नमा सलमाले भनिन्, ‘दिदीले पढ्नुभएको थिएन, त्यसकारण मलाई पनि पढ्न दिनुभएन ।’
‘तपाईंलाई पढ्न मन थिएन त ?’ अर्को प्रश्नमा उनी केही निराश देखिइन् । भनिन्, ‘पढ्न त अहिले पनि मलाई मन छ । पहिले पढ्न मन हुँदाहुँदै पनि पढ्न नदिएका हुन्, मेरो पढाइ छुटाइदिएका हुन् ।’
सलमाको परिवारमा १० जना सदस्य छन् । एक जना दिदी, सलमा, तीनजना बहिनी, ३ जना भाइ, बुबा र आमा ।
बुबा ट्रान्सपोर्टको गाडी चलाउने काम गर्थे । बुबाको त्यही कमाइले नै परिवारको दैनिकी चलिरहेको थियो ।
घरमा बुबाको कान्छी बहिनी अर्थात् फुपू पनि बस्ने गर्थिन् । उमेरले सलमाभन्दा जम्मा २ वर्ष जेठी थिइन् उनकी फुपू । तर पनि सलमा र फुपूबीच राम्रो सम्बन्ध थिएन ।
सलमा रुढीवादी मुस्लिम समाज र संस्कारबाट बाहिर निस्कन चाहन्थिन् । पढ्न चाहन्थिन्, स्वतन्त्र भएर साथीभाइसँग खेल्न चाहन्थिन् । बुर्का लगाएर अनुहार ढाक्ने मन पनि थिएन ।
तर उनको परिवार पुरातनवादी धार्मिक आस्थाप्रति कट्टर थिए । महिला तथा छोरीहरु घरबाट बाहिर निस्कन हुँदैन भन्ने मानसिकता बोकेका । छोरीहरु घरबाट बाहिर निस्कन हुँदैन भन्ने सोच थियो सलमाका बुबा र फुपूको । यद्यपि फुपू भने लखनउमै आफन्तको घरमा बसेर राम्रो शिक्षा लिएकी व्यक्ति थिइन् । फुपूले कति पढेकी छिन् भन्ने चाहिँ सलमालाई थाहा छैन । उनलाई यत्ति थाहा छ कि फुपूले राम्रै शिक्षा लिएकी छिन् ।
उमेरले १९ लागेपछि फुपूको विवाहको कुरा चल्यो । विवाहको कुरा चलेपछि फुपू कपिलवस्तु आएकी थिइन् । विवाहको तयारी हुँदै गर्दा फुपू काका वा दादा (हजुरबुबा)को घरमा नबसी सलमाको घरमा नै बस्न आएकी थिइन् । त्यसपछि सलमा र फुपूबीचको सम्बन्ध राम्रो हुन सकेन ।
सलमालाई घरबाट बाहिर निस्किएर साथीभाइसँग खेल्न मन पथ्र्यो । बुर्का फुकालेर निस्फिक्री हिँड्न र डुल्न मन थियो । बजार जाँदा वा आफन्तको जाँदा बुर्का खोल्न मन पथ्र्यो । तर उनको धर्म र संस्कार र समाजले उनलाई त्यसो गर्ने स्वीकृति दिएको थिएन । त्योभन्दा ठूलो बाधा उनकै परिवारबाट थियो । सलमालाई उनका बुबाले घरबाट बाहिर निस्कन प्रतिबन्ध लगाएका थिए । सलमा आफ्नै घरमा बन्दी जीवन बिताइरहेकी थिइन् ।
सलमाकै कुरा पत्याउने हो भने फुपूले सलमाको बारेमा नराम्रो नराम्रो कुरा सलमाकी बुबालाई सुनाउने गर्थिन् । जसका कारण सलमाले प्रत्येक दिन बुबाबाट पिटाइ खानुपथ्र्यो ।
सलमालाई बुबाले मात्रै होइन, फुपूले पनि बेलाबेलामा पिट्ने गर्थिन् । प्रत्येक कोही न कोहीबाट पिटाइ खाने सलमाको दैनिकीको नै बनेको थियो ।
‘किन पिट्थे नि ?’ रातोपाटीको प्रश्नमा सलमाले पिटाइ खानुपर्नाको कारण सुनाइन् । ‘घरमा तीनजना भाइहरु थिए । मेरो काम उनीहरुको हेरचाह गर्नुहुन्थ्यो । त्योबाहेक घरको काम पनि मैले गर्नु नै पथ्र्यो । कहिलेकाहीँ घरको काम गर्न सकिन वा भाइहरुलाई राम्रोसँग हेर्न सकिने भने पनि मैले पिटाइ खानुपथ्र्यो ।’
जब बाहिर निस्कन प्रतिबन्ध लाग्यो...
सलमा जब घरबाट बाहिर निस्कन्थिन्, फुपूले त्यो कुरा हतार हतारमै सलमाको बुबालाई लगाइदिन्थिन् । अनि बुबा आएलगत्तै उनी कुटाइ खानका लागि तयारी अवस्थामा रहनुपथ्र्यो ।
पिटाइकै कारण विषसमेत खाइन् सलमाले
आफ्नै घरमा बन्दी जीवन बिताउनु परेको र सधैँ पिटाइ खानुपर्ने बाध्यता भएपछि सलमाले एक दिन विषसमेत सेवन गरिन् । घरमा फुपूले पिट्दै खानासमेत नदिएपछि सलमाले विष खाइदिएकी थिइन् ।
तर उनको भाग्य ठूलो रहेछ, समयमै उनको उपचार भयो र उनी बाँच्न सफल भइन् । यद्यपि त्यसपछि पनि सलमालाई हेर्ने परिवारको नजरमा कुनै परिवर्तन आएन । बरु उनीमाथिको निगरानी झन् झन् बढ्न थाल्यो ।
जब ‘आजादी’ रोजिन्
१४ अप्रिल २०१९ । सलमा त्यस दिन पनि घरमै थिइन् । बुबा कामका लागि बाहिर निस्किएका थिए । दिदी सिलाइ कटाइको काम गर्ने भएकाले कहिले घरमा त कहिले पसलमा हुन्थिन् । फुपू भने घरमै बस्थिन् । भाइहरु खेल्नका लागि साथीभाइसँग छिमेकमा थिए ।
फुपूले सलमालाई भाइहरुलाई लिएर आउन भनिन् । तर बुबाले घरबाट बाहिर जान ‘प्रतिबन्ध’ लगाएकाले सलमाले बाहिर नजाने बताइन् । तर फुपूले ‘भनेको काम नमान्ने’ भन्दै सलमालाई धेरै पिटिन् ।
त्यस दिन सलमालाई निकै चित्त दुख्यो । सधैँको कुटपिट र बन्दी जीवन बिताउनुभन्दा ‘आजादी’ खोज्ने सलमाले निधो गरिन् । अनि घर छाडेर हिँड्ने निर्णय लिइन् ।
आफूलाई सधैँ पिट्ने फुपूको विवाहको कुरा चल्दा फुपूलाई हेर्न आएका केटाले सलमालाई ५ सय भारतीय रुपैयाँ दिएर गएका थिए । सलमाले त्यो पैसा आफूसँग सुरक्षित राखेकी थिइन् ।
अनि आफूसँग भएको त्यही ५ सय भारतीय रुपैयाँ बोकेर उनी कपिलवस्तुबाट उत्तरप्रदेशको सिद्धार्थनगर जिल्लामा पर्ने बर्नी भन्ने स्थानतर्फ लागिन् ।
हजुरआमा बिरामी भएकाले सलमाको आमा पनि मामाको घरमै गएकी थिइन् । त्यसकारण सलमा कसैलाई केही नभनी घरबाट निस्किइन् ।
उनी कपिलवस्तुबाट उत्तरप्रदेशको बर्नी भन्ने स्थानमा पुगिन् । अनि त्यहाँबाट दिल्लीका लागि रेल चढिन् ।
‘अनि टिकट ?’ हाम्रो प्रश्नमा मुस्कुराउँदै उनले भनिन्, ‘टिकटबारे थाहा नै थिएन, म टिकट नकाटी ट्रेन चढेकी थिएँ ।’
आश्रममा पुगेपछि सलमालाई सम्झाउन थालियो । यदि सलमालाई उनीहरुले त्यहाँ नभेटेर अरू कोही बदमास मानिसले भेटेको भए के हुनसक्थ्यो भनेर सम्झाए ।
‘के हुनसक्ने रहेछ त ?’ हाम्रो प्रश्नमा मुस्कुराउँदै सलमाले भनिन्, ‘बहुत बुरा हो सक्ता था, में बालबाल बची ।’
१५ अप्रिलको बिहान सलमा पुरानो दिल्लीको आनन्द बिहार स्टेसनमा ओर्लिइन् ।
त्यहाँबाट कहाँ जाने, के गर्ने, के खाने, कहाँ बस्ने कुनै योजना थिएन । सलमा अलमलमै परिरहेकी थिइन् । करिब आधा घण्टा सलमा रेलवे स्टेसनमै टोलाइरहिन् ।
‘अनि कहाँ जान्छु र के गर्छु भनेर दिल्ली पुगेको त ?’ हाम्रो प्रश्नमा सलमा केही समय चुपचाप बसिन् । धेरैपछि सलमाले भनिन्, ‘मलाई घरबाट जसरी पनि बाहिर निस्कनु थियो । कहाँ जाने, के गर्ने, के खाने भन्ने केही कुरा थाहा थिएन । मैले टिभीमा देखेको थिएँ, दुःखमा परेपछि पुलिसले अनाथ आश्रममा लगेर राखिदिन्छ । केही नभए अनाथ आश्रममा पुग्छु भन्ने सोच थियो । त्यही भएर म हिँडेको थिए ।’
स्टेसनमा टोलाइरहेको बेला भारतकै बाल कल्याण समितिका ‘रेस्क्यु टिम’ले सलमालाई भेट्यो । टोलीले सलमालाई कहाँ जान आएको ? कोसँग आएको ? किन आएको लगायतका प्रश्नहरु सोधे ।
सलमाले आफ्नोबारे सबै कुरा बताइन् । त्यसपछि त्यो टोलीले सलमालाई लिएर पहिले प्रहरी कार्यालय गयो । त्यहाँ सबै कुरा टिपाएपछि त्यो टोली सलमालाई लिएर सेल्टर (आश्रम)मा गयो । सेल्टरमा सलमाजस्तै अन्य धेरै किशोरीहरु राखिएका थिए ।
आश्रममा बेचबिखनमा परी वेश्यालयबाट उद्धार गरिएका किशोरी र युवतीसमेत थिए । उनीहरुको कथा पनि सलमाले सुनिन् । त्यसपछि आफू ठूलो दुर्घटनाबाट बचेको महसुस सलमाले गरिन् ।
नेपाली नागरिकलाई लामो समय भारतको आश्रममा बस्न दिइँदैन । कानुनले पनि त्यस्तो गर्न दिँदैन । सलमा १ सय ६५ दिन अर्थात् साढे ५ महिना दिल्लीको आश्रममा बसिसकेकी थिइन् ।
त्यसपछि दिल्लीको बाल कल्याण समितिले नेपाली दूतावास दिल्लीमा सम्पर्क गरी आफ्नो नागरिक लैजान पत्र लेख्यो । दूतावासमा पत्र आएपछि दूतावासले दिल्लीमा रही नेपाली युवती र किशोरीको उद्धार तथा घरफिर्तीमा सहयोग पुर्याउँदै आएको संस्था आफन्त नेपाललाई सम्पर्क गरी किशोरीलाई नेपाल पुर्याउन आग्रह गरेको थियो । त्यसपछि सलमा अक्टोबर ३ अर्थात् असोजको १६ गते दिल्लीबाट चितवन आइपुगिन् ।
नेपाल आए पनि सलमालाई आफ्नो घर जान भने मन छैन । संस्थाबाटै एक दुई पटक उनले फोनमार्फत् परिवारसँग कुराकानी गरेकी छिन् । तर घर जाने सोच सलमालाई आएको छैन ।
अध्ययन छाडेको ६ वर्ष भइसकेकाले अध्ययनलाई फेरि अगाडि बढाउने सम्भावना ज्यादै कम छ । त्यसमाथि नियमित शिक्षाभन्दा पनि मदरसा शिक्षा लिएकीले अब फेरि नियमित विद्यालयमा पढ्न सक्ने अवस्था छैन ।
त्यसकारण सलमा यतिबेला सेल्टरमै सिलाइ कटाइको तालिम लिइरहेकी छिन् । सलमाको दिदी पनि सिलाइ कटाइको काम गर्ने भएकाले सलमालाई पनि त्यही काम सिकेर काम गर्न मन लागेको छ ।
आफन्त नेपालकी जिल्ला संयोजक केमिका घिमिरेका अनुसार अहिले सलमाले राम्रोसँग सिलाइ कटाइको तालिम लिइरहेकी छिन् । उनले सिलाइ कटाइ सिक्ने विषयमा ज्यादै रुचि राखेकी छिन् र उनले चाँडै नै राम्रो ज्ञान लिने सम्भावना देखिएको छ ।
विवाह गर्न मन छैन
सलमाको परिवारमा १९–२० वर्ष लागेपछि विवाहको कुरा हुन थाल्छ । तर सलमालाई अहिले नै विवाह गर्न मन छैन । आफूले राम्रोसँग काम सिकेर काम गर्ने र आत्मनिर्भर बन्ने सलमाले सपना देखेकी छिन् । सलमाले भनिन्, ‘म त विवाह नगर्ने ।’
‘अभी नहीँ और कभी नहीँ ?,’ हाम्रो प्रश्नमा उनी थोरै मुस्कुराइन् तर कुनै जवाफ नदिई चुपचाप बसिन् ।
बुर्का लगाउन मन छैन, जिन्सको पाइन्ट मन पर्छ
रातोपाटीको टोली उनी रहेको आश्रममा पुग्दा उनी साधारण कुर्ता र सलवारमा भेटिएकी थिइन् । मुस्लिम परिवारकी छोरी भएका कारण बुर्का उनको धर्म, संस्कार, संस्कृति र परिवारमा अनिवार्य नै थियो ।
तर उनी साधारण कुर्ता र सलवारमा थिइन् । यद्यपि उनको मनमा कुनै धक भने थिएन ।
कुराकानीको अन्त्यमा हामीले सोध्यौँ, ‘तपाईंलाई कस्तो ड्रेस लगाउन मन पर्छ ।’
मुस्कुराएर उनले जवाफ दिइन्, ‘मलाई जिन्सको पाइन्ट र टिसर्ट लगाउन मन पर्छ । तर बाबा, ममीले लगाउन दिनुहुन्न । त्यही भएर लगाउन पाउँदिनँ ।’
Oct. 21, 2019, 5:50 p.m. Raaz Warsi
बुर्का हिजाब मुस्लिम धर्म सन्स्क्रितीमा बिल्कुलै अनिवार्य होइन। केही मात्रामा गल्फ क्षेत्र (साउदी र वरपरका क्षेत्र) बाहेक पाकिस्तान, अरब, अफ्रिका, सेन्ट्रल एसिया, योरोप लगायत विश्व भरीका ९०% मुस्लिम समाजहरु मा बुर्का, हिजाबको प्रयोग समाप्त भै सकेको छ। तर ईन्डिया, पाकिस्तान, अफ्गानिस्तानको ग्रामीण क्षेत्रमा अझै पनि बुर्कालाई मुस्लिमको पर्याय या पहिचान बनाइएको छ। यस क्षेत्रमा मुल्लामौलवी, मदर्सा र रुढीवादी प्रचारक हरुको प्रभाव र मुर्खता ले यस्तो भएको हो। पछिल्लो समयमा साउदी आर्थिक सहयोगले सन्चालित रुढीवादी वहाबी मिशनको विस्तारले बुर्का सन्स्क्रितीलाई झन बलियो सँग लागु गरेको छ। दुर्भाग्यबश शिक्षित र जागरुक युवा युवती हरुले पनि समाज बदल्ने साहस् र क्षमता देखाउन सकेका छैनन। बुर्का कल्चरले करोडो करोड महिलाको जीवनमा अन्धकार ल्याएको छ र समाजलाई गरीबी, पछौटेपन, बदहालीमा धकेलेको छ।